ရေးသားသူ အောင်ဦး ရေးသားချိန် 16.12.09
We are very appreciate and respect to your every post because you are younger than all of us but your thoughts is always with how to promote to develop and distribute of our buddhisim. We could not know like you when we were young.
Any way, We all haveacommon responsibility for our world and are connected with everything in it.
သာသနာအကျိုး တိုးပွားစေလိုတဲ့ စေတနာလည်း ပေါ်လွင်တယ်...
သာသနာအတွက် တာဝန်ရှိသူတွေ ကြောင့်ကြမဲ့ မနေခဲ့ဘူးဆိုတာလည်း ပေါ်လွင်တယ်...
သာသနာအပေါ်မှာ တာဝန်သိသိ ဝန်ထမ်းစစ်စစ် ဖြစ်စေလိုတဲ့စိတ်လည်း ပေါ်လွင်တယ်...
မြတ်ဗုဒ္ဓသာသနာအပေါ်မှာ ထားရှိတဲ့ စိတ်ကောင်းလေးကို သာဓု သုံးကြိမ် ခေါ်ဆိုသွားပါတယ်...
တကယ့်ကို အနှစ်သာရ ပြည့်ဝတယ်..သာသနာအပေါ်ထားတဲ့ စိတ်ဓာတ် ပေါ်လွင်လှပါတယ်။ အထူးအဆန်းဆိုရင် ဥာဏ်မယှဉ်ဘဲ ပြေးတတ်ကြတဲ့သူတွေကို သတိပေးပုံလေးကလဲ သဘောကျစရာပါ။ ယုံကြည်မှုနဲ့ နှိုင်းချိန်တတ်မှုကလဲ တကယ်အရေးကြီးပါတယ်။
ရဟန်းစစ် ရဟန်းမှန် ပီသမယ်..ဆိုရင်
ဘုရားသားတော် အစစ်အမှန်ဖြစ်မယ်ဆိုရင် .
ရဟန်းဝိနည်းကို ဘယ်လို အကြောင်းပြချက်များကြောင့် မဖောက်ဖျက်ပါဘူးး..
သူတော်ကောင်း အစစ်အမှန်ဆိုလျှင်လဲ မိမိတော်ကြောင်း တတ်ကြောင်းကို လူသိထင်ရှား မပြောဆိုတတ်ပါဘူး..
နံမည်ကြီးအောင် ပြောဆိုအသိပေးနေပြီဆိုပါလျှင်လဲ. ရည်မှန်းချက်တခုခု အောင်မြင်ချင်သော ရည်ရွယ်ချက်ရှိနေလို့ ဖြစ်ပါတယ်...
လူတိုင်းမှာ တာဝန်ကိုယ်စီရှိနေပါတယ်ဆိုတာ ဒီပို့စ်လေးက မီးမောင်းထိုးပြနေသလိုပါပဲ...
သာသနာ့အမှိုက် အညစ်အကြေးများကို လူတိုင်း သုတ်သင် ရှင်းလင်းနိုင်ကြပါစေ...
သာသနာအတွက် ဘယ်တုန်းက ဘယ်ဆရာတော်က ဘာကြောင့် ဘယ်လို လုပ်ခဲ့တယ် ဆိုတဲ့ အချက်အလက်တွေကို စုစုစည်းစည်း ဖေါ်ပြထားလို့ သိပ်ကို ပြည့်စုံပြီးတန်ဖိုးရှိတဲ့ ပို့စ်ကောင်းလေးတခု ကိုဖတ်ရတာ အကယ်ပဲ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ အခုလို တန်ဖိုးရှိပြီး အနှစ်သာရနဲ့ ပြည့်စုံတဲ့ သာသနာ့အကျိုးပြုစာတွေ ဆက်လက်ရေးသားနိုင်ပါစေ။
ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်စစ်စစ် ဖြစ်လိုသူတိုင်းအတွက် မဖြစ်မနေ သိသင့်သိထိုက်တဲ့ ဒီအကြောင်းအရာကို မအားလပ်တဲ့ကြားက ရေးသားမျှဝေပေးတဲ့ အတွက် ကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပြီး ထေရ၀ါဒ ဗုဒ္ဓသာသာနာ တော် အတွက် အဖိုးမဖြတ်နိုင်တဲ့ သားကောင်း တယောက်ကို ရိုသေလေးစားမိပါတယ်... သာသနာ့တာဝန်ကို အမှန်တကယ်ထမ်းဆောင်နိုင်မယ့် ၀န်ထမ်းတယောက် ဖြစ်အောင်လည်း ကြိုးစားရမယ်ဆိုတာ နားလည်သွားပါတယ် အကိုရေ....
လူတိုင်းဖတ်သင့်တဲ့ ပိုစ် လေးတစ်ခုပါ တရားဓမ္မတွေ မျှဝေပေးတဲ့အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ် အကိုအောင်ဦး တစ်ယောက် ပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့ပါစေ
တန်ဖိုးရှိသော စာပေများကို ဖြန့်ဝေပေးတာ ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ကိုအောင်ဦး